Saliida horay loo xiiro, maxaad u isticmaashaa? | Ragga Stylish
Ma aha qasab, laakiin isticmaal wanaagsan saliid horay loo xiiray, waa in kabadan inta lagugula taliyay haddii aad xanuunsato markaad xiiraysid, ama maqaarkaagu waa xanaaqsan yahay, waxaad leedahay maqaarka aad u qalalan ama xasaasi ah, ama aad leedahay goyn joogto ah ama haddii aad leedahay a gadh aad u adag.
Intaas waxaa sii dheer, haddii midkoodna uusan kiiskaaga ahayn, weli waan kugula talineynaa, waxay caawineysaa maqaarka waxayna u diyaargareysaa xiirasho "siman" iyo sidoo kale daryeelka maqaarkaaga intaad "dil" ku disho garbaha. xiirashada ayaa ah mid maqaarka wax u dhimeysa, waana inaan dhowrnaa sida ugu macquulsan.
Waxaan ku siineynaa talooyin aad u baahan tahay inaad raacdo si sax ah isticmaalka saliidahan:
Wejigaaga ku qoy biyo kulul muddo, si aad u furto daloolada oo aad uga dhigto gadhka inuu u soo baxo si fudud.
Markaad wajigaaga qoyso, si tartiib ah u qalaji, adigoon xoqin oo wejigaaga qoyan.
Saliida si fiican ugu shub meesha aad xiiri doonto oo sug dhowr ilbiriqsi ka hor intaadan shaqada u dhaqaaqin.
Ha saarin saliida ilaa aad dhameysid xiirashada oo aad dhaqdo wajigaaga.
Waxaan kugula talinayaa qaar ka mid ah saliidahan horay loo xiirayo, oo aad ka heli karto nooc kasta oo takhasus gaar ah leh, sida Dadka o egohomme:
Crew American Saliidaha Xiirashada Saliida: iibka ah dukaamada khaaska ah. Way cusub tahay oo mar hore waa iib weyn, isku day!.
Anthony Logistics Xalka Pre-Xiirashada Korontada: saaxiibka ugu fiican ee kuwayaga ku xiirista mandiil. Mar dambe cudurdaar ma jiro, marka lagu daro, waxay sii socotaa waqti dheer.
Taxanaha Shaybaarka ee Smooth Xiira Saliid
E-xiir Almond Pre xiiro Saliid 59ml
Waxaad arki doontaa sida tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah maqaarkaaga u xiirto iyo xiirashada dhib dambe maahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Saliida horay loo xiiro, maxaad u isticmaashaa?